Semalt: CTR र वास समय को माध्यम बाट राम्रो रेटिंग प्राप्त गर्नुहोस्
के तपाईं हार मान्दै हुनुहुन्छ? वा तपाइँ निराश हुनुहुन्छ कि तपाइँको वेबसाइटले राम्रो कार्य गरिरहेको छैन। सफलताको यात्रामा, यो सामान्य हो। एक कम्पनी को रूप मा, Semalt धेरै ग्राहकहरु हाम्रो ढोका मा हिंडेको देखेका छ वा निराश हाम्रो वेबसाइट मा खाता बनाउनुहोला किनभने उनीहरूको वेबसाइट राम्रो छैन।
हाम्रो टीमबाट प्रोत्साहनका केही शब्दहरू र हाम्रा प्याकेजहरूमा केही हप्ताहरू, उनीहरूले इन्टरनेटको बारेमा आफ्नो धारणामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूको अनुभव गर्छन्। त्यसोभए तिनीहरू ठूलो हाँसका साथ फर्केर आउँदछन्, सबै खुशी छन् किनभने उनीहरूले हामीलाई विश्वास गरे।
त्यसोभए के तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइट को लागी ईन्टरनेट प्राप्त गर्न समस्या छ? यो तपाईलाई छक्क पर्नेछ कि गुगल द्वारा प्रत्येक साइट पत्ता लगाइएको छैन। यसको मतलब यो हो कि ती वेबसाइटहरू कहिले पनि खोज ईन्जिनमा फेला पार्न सकिदैन, बाहेक प्रयोगकर्तालाई निर्दिष्ट वेबसाइटलाई थाहा छ। अब तपाईं त्यो हुन चाहनुहुन्न।
तपाइँ तपाइँको वेबसाइट पहिलो पृष्ठ मा भएको चाहानुहुन्छ, दयालुपूर्वक पहिलो स्थानको मुकुट बोक्दा तपाइँको कुञ्जीशब्दहरू खोजी गरिन्छ। यो ठूलो सुनिन्छ, तर यो प्राप्त गर्न सजिलो छैन। तपाइँलाई त्यहाँ पुग्न मद्दत गर्नको लागि तपाइँलाई Semalt जस्ता पेशा चाहिन्छ। हामीले गर्ने एउटा तरिका तपाईंको CTR र डेभल टाइम सुधार गर्नु हो।
तपाइँले किन क्लिकहरू पाउनु भएको छैन भनेर पत्ता लगाउनु मुश्किल हुन सक्छ। सबै पछि, त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन गलत हुन सक्छ। तपाईंको प्रतिस्पर्धाले तब तपाईंलाई सम्झना गराउँछ कि एक मृत शरीर लुकाउने गुगलको दोस्रो पृष्ठमा छ, र यही ठाउँमा तपाईंको वेबसाइट खस्दछ। यो पीडादायी छ। खैर, यो हुनुको कारणहरू मध्ये एक तपाईंको CTR को कारण हो।
क्लिक-थोरै दरहरू के हुन् (CTR)
क्लिक-थ्रु रेट प्रयोगकर्ताहरूको अनुपात देखाउन प्रयोग गरिन्छ जसले त्यो पृष्ठ हेर्ने प्रयोगकर्ताहरूको संख्यामा एक विशिष्ट लि link्कमा क्लिक गर्छन्। यो विज्ञापन वा ईमेलमा क्लिकहरूमा पनि लागू गर्न सक्दछ। तपाइँको विज्ञापन अभियान कती सफल हुँदैछ भनेर मूल्या evalu्कन गर्न CTR प्रयोग गरिन्छ। नतिजाको रूपमा, अझ राम्रा रैंकिंग पृष्ठहरूमा उत्तम क्लिक-थ्रू दरहरू छन्। तर यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि यो केवल कारक मात्र होइन जसले लिंकहरू आकर्षित गर्दछ। यदि तपाइँको भ्रमण लिनुहुन्छ भने Semalt वेबसाइट, तपाइँ अन्य कारकहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाइँको वेबसाइटमा ट्राफिकलाई असर गर्दछ।
CTR हरू किन महत्त्वपूर्ण छन्?
खोज ईन्जिनहरूले राम्रो क्लिक-थ्रू दरहरू उनीहरूको मुटुको नजिक राख्छन्। यसको कारणले धेरै कारकहरूलाई समेट्छ, तर धेरैले विश्वास गर्दछन् किनकि यी ईन्जिनहरूले सशुल्क ट्राफिक चलाउन सुरू गरे। यसको मतलब यो हो कि वेबसाइटहरूले पहिलो पृष्ठमा आफ्नो स्पट किन्नुहोस्। यद्यपि यो सुझाव दिईंदैन किनकि धेरै पटक तपाईले भुक्तान गरिएको र्याकिंगमा पैसा फिर्ता गर्न पैसा खर्च गरेपछि तपाईको वेबसाइटसँग अर्गानिक एसईओमा फर्काउनु बाहेक अरु विकल्प छैन। त्यसोभए तपाईले आफ्नो वेबसाइट कम रेटि again फेला पार्नुहुनेछ। CTR हरू यी खोज इञ्जिनहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छन् किनकि तिनीहरू प्रति क्लिक प्रति मोडेल भुक्तान गर्छन्। यसको मतलब यो छ कि अधिक प्रयोगकर्ताहरू क्लिक गर्छन्, खोजी ईन्जिनले अधिक पैसा कमाउँछ।
त्यसोभए यदि हाम्रो Semalt विज्ञापनमा १,००० प्रभावहरू छन् र यसको एक क्लिक छ, यसको मतलब तपाईंसँग ०.%% CTR छ। यस परिणामले तपाइँको विज्ञापन कत्तिको प्रभावकारी हुँदैछ देखाउँदछ। तपाईंको लक्षित दर्शकहरूले तपाईंको विज्ञापनहरू प्रासंगिक भएको फेला पारेको छ वा छैन भनेर तपाईंलाई थाहा हुनेछ।
उच्च CTR मतलब तपाईंको विज्ञापनहरू तपाईंको दर्शकहरू द्वारा अत्यधिक प्रासंगिक मानिन्छ।
कम CTR मतलब तपाईंको दर्शकले तपाईंको विज्ञापनहरू कम सान्दर्भिक फेला पार्दछ।
कुनै पनि विज्ञापन अभियानको लक्ष्य भनेको योग्य र इच्छुक प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाइँको वेबसाइटमा आउन र केहि कार्यहरू गर्नको लागि प्राप्त गर्नु हो। यदि तपाईंसँग एक अनलाइन स्टोर छ भने, तपाईं आफ्ना आगन्तुकहरू खरीद गर्न वा दर्ता फारमहरू भर्न चाहनुहुन्छ।
तपाइँको CTR सुधार गर्दा, तपाइँले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाइँको विज्ञापन प्रासंगिकता सुधार गर्नु हो। यो गर्नका लागि तपाईले यी विज्ञापनहरू र तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको स्थान हेर्नु पर्छ।
राम्रो CTR भएको
हामीले उच्च CTR को अर्थ के हो भनेर उल्लेख गरेका छौं, तर के त्यो राम्रो CTR भएको जस्तै हो? यो प्रश्न धेरै सामान्य र मान्य छ यदि तपाईं सकेसम्म धेरै सिक्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने। Semalt मा, हामी विश्वास गर्दछौं कि जानकारी शक्ति हो, त्यसैले हामी तपाईंलाई प्रोन्धनको प्रश्न सोध्न हौसला दिन्छौं जब तपाईं अन्धकारमा छाडिएको महसुस गर्नुहुन्छ। जे भए पनि हामी सँगै छौं।
उत्तर, तथापि, केहि कारकहरूमा निर्भर गर्दछ
तपाईंले बिड गर्दै हुनुहुन्छ किवर्डहरूको सेट
राम्रो CTR हुनको लागि तपाइँसँग प्रासंगिक विज्ञापन अभियान हुन आवश्यक छ जुन तपाइँको उद्देश्य दर्शकहरूलाई अर्थ दिन्छ। अनिवार्य रूपमा यसले उच्च सीटीआर दरहरूमा परिणाम दिन्छ, जुन उत्कृष्ट छ। साथै, तपाईंले यो याद राख्नुपर्दछ कि कम सीटीआर दर हुनुको मतलब तपाईंको गुणस्तर कम हुनेछ, र गुगलले तपाईंलाई श of्काको फाइदा दिँदैन, नयाँ विज्ञापन अभियानको साथ पनि।
यसैले तपाईलाई पेशेवरहरू राख्नु पर्छ तपाईलाई राम्रो CTR र उच्च स्कोरहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि जब गुगलले तपाईंको रूपान्तरण दर उच्च छ भनेर याद गर्दछ, यसले स्वचालित रूपमा तपाईंको विज्ञापनहरू उच्च स्थान दिन्छ जब कुञ्जी शब्दहरू खोजी गरिन्छ।
एक वेबसाइट मालिकको रूपमा, तपाइँ केवल पहिलो पृष्ठमा तपाइँको वेबसाइट हेर्न चाहनुहुन्न, तपाइँ पनि यो पर्याप्त राम्रो हुन आवश्यक छ तपाइँको पाठकहरूले वास्तवमै तपाइँले बनाउनु भएको सामग्री हेर्नको लागि रहनुभएको छ। Semalt मा हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं कि बस्ने समय तपाईंको वेबसाइटको प्रदर्शनको सत्य सीरम हो। तपाईले कति ट्राफिक लिनुहुन्छ भन्ने ठाउँमा राख्नुहोस्, समयले तपाइँको सामग्री प्रासंगिक छ वा छैन भनेर देखाउँदछ।
यो धेरै वेब विश्लेषकहरू मापन गर्न असफल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधा बहसपूर्ण छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, निवास समय भनेको वास्तविक समयको लामो लम्बाइ हो जुन एक आगन्तुकले तपाईंको पृष्ठमा खर्च गर्दछ। यो डाटा महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले वेबसाइटको मालिकलाई देखाउँदछ कि साइटमा छोड्दा वा अर्का कार्यहरू गर्नु भन्दा पहिले आगन्तुक पृष्ठमा रहेको सामग्री उपभोग गर्न पर्याप्त लामो समयसम्म बसे।
अब तपाईं अलमल्लमा पर्नुहुनेछ किनकि यदि तपाईंले बाउन्स रेटको बारेमा हाम्रो लेख पढ्नुभयो भने, तपाईंलाई लाग्छ कि त्यहाँ कुनै विरोधाभास छ। खैर, हामी छैन। तपाइँलाई भिन्नता बुझ्नको लागि, हामी बाउन्स रेट र वास्तविक बाउन्स रेट बीचको भिन्नता वर्णन गर्नेछौं।
गुगल एनालिटिक्स को लागी एक पेज मा खर्च गरेको सही समय जान्न को लागी, यसलाई दुई क्लिकहरु, प्रविष्टि क्लिक, र निकास क्लिक को आवश्यकता छ। जहाँसम्म, यदि एक आगन्तुकले पृष्ठ प्रविष्ट गर्दछ र seconds सेकेन्ड खर्च गर्दछ भने बाहिर जान्छ, यो वास्तविक बाउन्स दर मानिन्छ। यो किनभने यो स्पष्ट छ कि समयको विन्डो त्यो पृष्ठमा रहेको जानकारी खपत गर्न एकदम थोरै छ। यसको मतलव आगन्तुकलाई थाहा थियो कि त्यो पृष्ठ ऊ वा उनी चाहेको थिएन।
जहाँसम्म, यदि एक आगन्तुकले धेरै लामो सामग्रीको साथ वेबपृष्ठमा २ minutes मिनेट खर्च गर्दछ भने, यो वास्तविक बाउन्स होइन। यसको कारण यो छ कि आगन्तुकले त्यस समयमा सामग्री पढिरहेको थियो, र जब तिनीहरू छोड्दछन्, तिनीहरू रमाउँछन् र वास्तविक बाउन्सको मामलामा रिसाउँदैनन्।
यो एक कारण यो छ कि बस्ने समय यति महत्त्वपूर्ण छ। यसले तपाईंको वेबपृष्ठमा रहेको सामग्रीको गुणस्तर देखाउँदै राम्रो कार्य गर्दछ।
के डिवेल समय र्याकिंग सिग्नल हो?
यो प्रश्न SEO को शुरुवातदेखि नै लम्बाइमा बहस हुँदै आएको छ। कुनै पनि दिशामा मापन टिप नगर्ने प्रयासमा, गुगलले आफ्नो डाटामा प्रयोग गर्ने कुनै खास मेट्रिक वा एल्गोरिथ्मको बारेमा कडासँग पछाडि पसेको छ। यद्यपि, केहि सुविधाहरूको हटाउने र परिचयले समयको महत्त्व राख्दछ भन्ने कुरा संकेत गर्दछ।
कसरी बस्ने समय बढाउन
यसको सरल उत्तर Semalt भर्ना हो। अधिक जटिल उत्तर यो छ कि तपाइँले Semalt राख्नु पर्छ तपाइँलाई शीर्ष गुणवत्ता सामग्री प्रदान गर्न। त्यहाँ कुनै जादुई बुलेट वा इन्टरनेट ह्याक छैन जब यो तपाईंको निवासको समय बढाउने आउँदछ, तर हामीसँग केही प्रविधिहरू छन् जुन तपाईंको आगन्तुकहरूलाई तपाईंको वेबसाइट अधिक आकर्षक देखिन मद्दत गर्न सक्छ।
राम्रो सामग्री उत्पादन गर्नुहोस्
जस्तो हामीले भन्यौं, तपाईंको सामग्री तपाईंको दर्शकहरूलाई बस्नको लागि उत्तम तरिका हो। तथ्य यो हो कि कोही पनि तपाईसँग के पढ्न रोक्दैन यदि यसको बकवास छ।
तपाइँको वेबसाइटले जे देखाउँदछ, त्यो हुनुपर्दछ
एकचोटि तपाईंको सामग्रीले यी सबै सर्तहरू पूरा गर्दछ, तपाईं आफ्ना दर्शकहरू लाई लामो समय भन्दा बढि आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
बलियो र अधिक तार्किक आन्तरिक लिंकहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
चूंकि निवास समय प्रयोगकर्ताले कुनै साइटमा लगइन गर्ने समय र उनीहरूको छोड्ने समय बीचमा मापन गरिएको हुन्छ, त्यसैले तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो वेबसाइटमा बिभिन्न सामग्रीहरू अवलोकन गरेर लामो समयसम्म रहन सक्नुहुन्छ। अतिरिक्त कार्यको लागि लिंक राखेर, तपाईंको दर्शकहरूले राम्रो समयको अनुभव गर्छन् र लामो समयसम्म बस्छन्। आन्तरिक लिinking्क पनि सुनिश्चित गर्दछ कि खोज इञ्जिन क्रलरहरूले तपाईंको वेबसाइटमा प्रत्येक पृष्ठ फेला पार्दछ।
राम्रो संलग्नता रणनीति अपनाउनुहोस्
यदि तपाइँका दर्शकहरू छोटो समयमा मात्र छोड्न आइपुग्छन् भने, हुनसक्छ तपाइँको सment्लग्नता को रणनीति यति ठूलो छैन। सान्दर्भिक भिडियोहरू, वा सामग्री सुझाव गरेर, तपाईं तिनीहरूलाई एक मजबूत प्रोत्साहनको साथ तपाईंको साइटमा रहन प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यनीति धेरै प्रभावकारी छ यदि सही ढ implemented्गले कार्यान्वयन गरियो। तपाईंको निवास समय तपाईंको दर्शकलाई तपाईंको वेबसाइट मार्फत स्क्रोलि keep राख्नको लागि तपाईंको क्षमतामा निर्भर गर्दछ। यो सबै तपाईं कसरी तपाईंको दर्शकलाई सँगै लैजानुहुन्छ त्यसमा निस्कन्छ। कहिलेकाँही, तपाईंसँग यति ठूलो सामग्री नहुन सक्छ तर तपाईंको स engage्लग्नता को रणनीति यति धेरै छ कि तपाईंको दर्शक लामो समय पर्खन्छ।
ठीक छ, Semalt यसले तपाइँको पाठकलाई केवल लामो समय सम्म रहन मद्दत पुर्‍याउँदछ, तर तपाइँ आफ्नो साइटमा चाहानु भए जस्तो धेरै पृष्ठहरू मार्फत स्क्रोल गर्नुहोस्।